မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေရုံသာမက ပြည်သူများအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ် | cincds
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၇
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်သဖြင့် ရှိရင်းစွဲကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်ရန်နှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်ကို ယခုထက်ပိုမို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပြည်သူချင်းရင်းနှီးမှု၊ တိုင်းရင်းသားချင်းရင်းနှီးမှုများကိုပါ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုပြောကြားလိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များ အား ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း၊ မိမိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာရှိကျင့်ဖျင်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်ကလည်း မိမိတို့ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသတွင်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုင်တောင်းဆို၍မရဘဲ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား သည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao အား အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao အား အလုပျသဘောနလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျး ဧညျ့ခံသညျ။ နလေ့ညျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။